सहकारीकर्मीका लागि श्रावण ३२ ऐतिहासिक :नेफ्स्कून अध्यक्ष पौड्याल | Press Pati
सहकारीकर्मीका लागि श्रावण ३२ ऐतिहासिक :नेफ्स्कून अध्यक्ष पौड्याल
लक्ष्मण बेल्वासे २०७७-०४-१६ १०:२६ मा प्रकाशित
श्रावण १६, बुटवल । नेफ्स्कूनका अध्यक्ष परितोष पौड्याल सहकारीकर्मीका लागि श्रावण ३२ ऐतिहासिक दिन हुने उद्घोष गर्नु भएको छ । साकोस अभियानको छवी संरक्षण र विकासमा नेफ्स्कूनका् भूमिका विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई विहिबार बुटवलमा सम्बोधन गर्दै यस्तो उद्घोष गर्नु भएको हो । अध्यक्ष पौड्यालले नेफ्स्कूनको ३३ औं वार्षिक उत्सवको अवसर पारेर श्रावण ३२ गते नेफ्स्कूनले केन्द्रिय कार्यालयको अत्याधुनिक भवनको शिलान्यास गर्ने बताउनु भयो ।
नेफ्स्कूनको नवनिर्मित भवन काठमाण्डौंको जुनसुकै स्थानबाट पनि देख्न सकिने र भवन अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न हुने स्पष्ट पार्नु भयो । अध्यक्ष पौड्यालले नेफ्स्कूननले आफु हिडने स्पष्ट महत्वकान्छी हाइवे निर्माण गरेको जानकारी दिने श्रावण ३२ गते औपचारिक रुपमा सार्वजनिक गर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले उक्त दिन देशभरका आफ्ना २४ कार्यालयबाट एकै पटक केक काटेर खुसीयाली मनाउने समेत स्पष्ट पार्नु भयो । अध्यक्ष पौड्यालले सन २०३० भित्र शाखा र मानव रहित सेवा प्रदान गर्दै न्यून ब्याजदरमा सहकारीले सेवा दिने जिकिर गर्नु भयो । अध्यक्ष पौड्यालले भन्नु भयो “ अब एकिकृत सफ्टवयर प्रणाली लागु गर्नुका साथै नेफ्स्कूनसंग आवद्ध सहकारीहरुको क्षमता विकास गर्दै सहकारी अभियानलाई जनमुखी बनाउने तर्फ नेफ्स्कून लाग्ने छौे । ’’
अध्यक्ष पौड्यालले कोभिडका कारण ५० लाख मानिसलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको बताउदै ती मानिसलाई रोजगारीसंग जोडने कुरामा सहकारीको भूमिका अझ प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा जोड दिनु भयो । उहाँले सहकारी भित्र वित्तिय संभावना र जोखीम त्यततिकै रहेको उल्लेख गर्दै जागरण, शशक्तिकरण र सदस्यहरुको ब्यवसायीकरणका माध्यमबाट चुनौतीलाई न्यून गर्दै लैजाने स्पष्ट पार्नु भयो । नेफ्स्कूनका अध्यक्ष पौड्यालले आफुहरु शंसोधित ऐनको पक्षमा रहेको जिकिर गर्दै सबै साकोसलाई नेफ्स्कूनको अभियानलाई साथ र सहयोग पु¥याउन आग्रह गर्नु भयो ।
साकोस म्यानेजर्स क्लब ५ नं. प्रदेश बुटवलद्धारा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा राष्ट्रिय सहकारी महासंघका संचालक भिमप्रसाद तुलाचनले कोभिडका बीच सहकारीको भूमिका प्रशंसा योग्य रहेको तर्क गर्नु भयो । त्यस्तै नेफ्स्कूनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले स्तरीकरण कोषका कारण सहकारी क्षेत्रमा देखिएको जोखिमलाई न्यून गर्न सकिने भनाई राख्नु भयो ।
कार्यक्रममा नेफ्स्कूनका उपाध्यक्ष शान्ति अधिकारीले निम्न वर्गको सहयात्रीको रुपमा सहकारीलाई लैजानु पर्नेमा जोड दिनु भयो । कार्यक्रमा नेफ्स्कूनका महासचिव दामोदर अधिकारीले नेफ्स्कूनको आगमी रोड म्याप सहितको कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । महासचिव अधिकारीले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै सहकारीको भावना, मर्म, सिद्धान्त अनुरुप सहकारीलाई समुदाय प्रति जवाफदेही बनाउदै समृद्ध समाज निर्माणमा योगदान गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भयो ।
साकोस म्यानेजर्स क्लब ५ नं. प्रदेश बुटवलका अध्यक्ष रणबहादुर थापाको अध्यक्षता क्लबका उपाध्यक्ष बद्रीप्रसाद पौडेलको स्वागत मन्तब्य र क्लबका सचिव टिकाराम तिमिल्सिनाको संचालनमा सम्पन्न भएको क्लबका कोषाध्यक्ष दिनामणी खनालले जानकारी दिनु भयो ।